1 Ịhọrọ ngalaba aha, web host, na onye na-ewu ụlọ
2 Regjistruar në internet vs WordPress.com
3 Shkarkoni WordPress në blogun tonë në plugin shtesë
4.3 2. Blogu i Ushqimit Okwu
6.1 Nzọụkwụ # 1: Blog / faqe interneti
6.2 Nzọụkwụ # 3: Mepụta ọdịnaya (na-elektrwasị anya në visuals)
WP gburugburu (ọgwọ) – Esi nri, Blogu i Ushqimit, Yum
WP mgbakwunye – Nutuza kacha mma WP, Simmer, çikore, esie
Obi dịkwa m ụtọ na ị na-ewere nzọụkwụ mbụ gị taa. Ya thjesht, ka anyị bido.
Ịhọrọ ngalaba aha, web host, na onye na-ewu ụlọ
Blog i malitit Iji nri gị, ihe atọ mbụ a ga-achọ bụ:
Një na ngalaba aha
Ọtụtụ mmadụ na-akparị maka iji ‘isi okwu’ na ngalaba aha nke mere na Google gosipụtara ya n’elu maka mgbe ndị ụrụ chọwara okwu ndị ahụ.
Algoritmi i motorit të motorit të motorit Otú ú dị, kenụnọ nke isiokwu ahụ na ngalaba aha agaghịzi emetụta.
Tani, ụ bụrụ na ịchọrọ imepe blog banyere nri paleo, ọgaghị akpọ blog gale paleofood.com. Ụbụlagodi, ime otu a agaghị enye gị ihe ọ bụla SEO brownie.
Ọzọkwa, ị ga-amatarịrị na ọ dị mma ịmalite blọọgụ nri ma jiri aha gị dị ka aha ngalaba. Yabụ, ụ bụrọ Jane Jane, ọ dị mma ịkpọ blog në JaneDeo.com gị.
N’ụzọ ahụ, ị ​​ga-enwe nkwụghachi dị elu n’ikpeazụ n’ihi na mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ị ga-aghọ onye ama ama gị na ama. Mund të jetë bërë më shumë impenjatori më i mirë.
Otu nnukwu ihe atụ nke ụdị aka ahụ bụ nkwado ndị ahịa, Mkpụrụ Egwu. Ose tani nuk keni një blog, "customersupportadvice.com".
Ozugbo w nweta aha ngalaba ahụ, ịkwesịrị chọta onye anabatara WordPress ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị ndụ.
Enwere ọtụtụ ndị nnabata websaịtị ịhọrọ site na, na tụtụ n’ime ha na-abịa na nchịkọta WordPress jisiri ike. Ihe d n iche n’etiti akaụntụ nnabata WordPress nkịtị na akaụntụ Bochum jisiri ike bụ na n’ikpeazụ, ndị na-eweta ndị ịbịa na-elektronikeọta nchekwa saịtị gị ma na-eme ka saịtị gị dị ịhPịrụ.
SiteGround – Shihni Tani më shumë se kah mma na nkwado ezigbo ndị ahịa.
Enwe Mmasị – Pritës i faqes në internet të Ezigbo, duke u ndërtuar kështu.
Ndị na-edebe weebụ nwere ike ịdị ọnụ ala dịka 3,99 $ / ọnwa na ọnụ ahịa dị ka $ 29 / ọnwa. Enwere onwe gị malite na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere atụmatụ ntinye na ntinye ma mechaa kwụọ ụgwọ ka okporo zọ gị na-eto.
Site na lọ rụ weebụ na aha ngalaba ahụ, ihe ọzọ a ga – achọ ịhọrọ bụ usoro ikpo okwu maka iwuli saịtị gị – ma ọ bụ onye na – arụ ọrụ na saịtị ahụ.
Për më tepër, ju lutemi përdorni në WordPress CMS.
Regjistruar në internet vs WordPress.com
Ọzọ kachasị mfe iji ghọta ọdịiche dị n’etiti a on-host na na një WordPress.com akaụntụ bụ ile any anya na URL gị ga-ele anya na nke ọ bụla.
Tani do të gjeni në faqen e internetit WordPress.com. O doro anya, ejiri akara mara WordPress niile.
Ihe nke abuo – yourfoodblog.com – Ndihmoni me internetin tuaj për të gjitha të drejtat tuaja.
Weebụsaịtị a na-akwadota na mppokọta WordPress.com bụ nke gị ma ọ bụrụ:
Ị bụ ONYE blogerja ime-elektronike
ON GAGH për të arritur… ma ọ bọ na ị maghị banyere ịmebi ịntanetị
Mos chọghị ịma banyere njimara nke gị
Ju jeni gjithnjë duke u përdorur me nhọrọ mmachi dị iche iche dịka enweghị nkwado plugin maka na ndị zọ
Don’tchọghị ire ere mgbasa ozi na saịtị gị (ọbụlagodi ọ bụghị ruo mgbe ị Ghọrọ weebụsaịtị okporo ụzọ dị elu)
Ọ bụrụ na nke ahụ abụghị, gaa maka websaịtị WordPress kwadoro. Unë jam një ga – enyere gị aka do të kërkoj urgjentisht duke përdorur informacione shtesë WordPress na plugins
Faleminderit për një blog ịmalite ịmalite blog. Maka nke a, ị ga-achọ isiokwu na plugins ole na ole.
Shkarkoni WordPress në blogun tonë në plugin shtesë
Një faqe e WordPress falas, në internet dhe faqet e faqes :h :rọ:
Kouki bụ maka gị ma ọ bụrụ na ị hụrụ ebe ọcha n’anya ma chọọ ntinye zen na ntakịrị. Kouki na-eji nnukwu font na-egosipụta ihe ngosi dị nnọọ mma. Klubi na na otu n’ime ntinye ihe ntanetị ndị a na-emepụta (a tụrụ aro n’okpuru ebe a), ị ga-adịkwa njikere iji ndụ gị na-ebi ndụ.
Cook’d Pro bụ isiokwu nri WordPress mara mma nke dị oke egwu na ngwaọrụ niile. Dịka ị pụrụ ịhụ na nseta ihuenyo dị n’elu, ọ na-elektronwasị anya na foto.
Ọzọkwa, a na-ewu ya na ntọala Jenesis, nke a maara na ọ na-agba ọsọ na ọkụ. Ihe mkpuchi nke usoro a na-abịa na ngalaba dị iche iche maka ntọala SEO yana maka ntọala ndị ọzọ.
Rịba ama na isiokwu Jenesis na-ebu naanị atụmatụ ịchọrọ; ha adighi-enwe otutu karia na bilbil. Nke ahụ kwuru, ha na-arụ ọrụ ha nke ọma.
2. Blogu i Ushqimit Okwu
Ju lutemi kërkoni një llogari më të shpejtë në echique isiokwu në blog në WordPress. Ọ na-abịa na ndekwaa ụzọ esi eme nri ma na-enyekwa gị ohere ịnabata ntinye nri sitere n’aka ndị na-agụ gị. Nkwado ntinye nri ndị a bụ nke a na-eji Cook gatuaj – ngwa mgbakwunye $ 39. Ntuziaka na ndepụta nke usoro nri dị na isiokwu a na-abịa na igbe nlele, si otú a na-enyere ndị na-agụ akwụkwide ika n’aka na ha agaghị echefu ma ọ bụ ihe ọ bụla dị mkpa.
Site n’iji nke ụ bụla n’ime isiokwu ndị dị n’elu, ị ga-adị njikere na blog rụ.
Dịka ọmụmaatụ, maka blọgụ nri gị, ị nwere ike ịchọpụta na ịchọrọ ụzọ kachasị mma ma kachasị mma iji gosipụta nri gị, ma ọ bụ na ịchọrọ ime ka nri foto post gị dị mte Ọrụ dị ka ndị a apụtaghị na isiokwu ahụ.
Shtojcat Iji nweta ọrụ dị otú ahụ, ịkwesịrị ịwụnye.
WordPress nuk ka plugins të tjera në blog, por ju doni të gjeni blog:
Ntụziaka sitere na Simmer bụ ngwa mgbakwunye ọzọ na-enye gị ohere ikwuputa Ezi ntụziaka na blọọgụ gị. Ọ na-enye ntọala dị mfe iji depụta ihe ndị dị na ya, nye ntuziaka esi nri na ozi ndị ọzọ. Ntụziaka ị gbakwunye na iji ngwa mgbakwunye a bụ ihe eji achọ injin maka enyim n’ihi na ngwa mgbakwunye a na-eji atụmatụ nhazi nke Google iji wuo ụlọ ụrụ enyi SEO.
Na Ejicha ya, onye ọ bụla n’ime ndị na-agụ gị na-enweta akwụkwọ profaịlụ. Nri ya na-abịa juputara na oge, nnukwu ihe nyocha na ihe oriri na-edozi ihe gbasara Ezi ntụziaka / nri. Maka atụmatụ niile ọ na-enye, ngg mgbakwunye bụ zuru ezu zuru ezu na 39 $.
Na shtojcë plugins Ndiqni shtojcave të tjera nga ole na ole m na-akwado saịtị ụ bụla inwe. Ihe ndị a akọwapụtaghị akọwapụtaghị aha ọ bụla dị ka nke a, ma tinye uru na saịtị ụ bụla ejiri ha. Lelee ndepụta zuru ezu ebe a.
Ọ dị mma – Yab nke një logjistikë na-elektrọta. ‘Ju lutemi kërkoni, shto, përdorim… yana ụfọdụ plugins nh nrọ.
N’oge a, ị dịla njikere ịmalite rụ ọrụ na blọgụ gị wee chọpụta isiokwu ị ga-ekpuchi, ugboro ole ị ga-ebipụta, nke usoro ntanetị mgbasa ozi na ị ga-anwale ishin gab Iji mee ka ihe dị mfe, gbalịa soro usoro ntinye 5 ahụ n’okpuru.
Nzọụkwụ # 1: Blog / faqe interneti
Chọrọ inweta nhazi blog gị nri ozugbo site na mbido n’ihi na ihe owuwu saịtị (karịchaa, isi nri ụzọ ya) ga-ekpebi etu ahụịịị igịbe ọrụ nke ndị ụrụ gị ga-esi dị.
Nke a dị mkpa blog maka nri maka ọdịnaya nke blog nwere ike ịgbatị ọtụtụ nri, nri, nri na ndị ọzọ. Yabụ, ọ bụrụ na inwetara nchịkọta nhọrọ nke weebụsaịtị ahụ n’aka nri, ị ga-amalite mmalite dị mma.
E ministuga ya, iche maka ihe saịtị gị ma ọ bụ naanị ime atụmatụ nchịkọta saịtị gị ga-enye gị oge iji tụgharịa uche ihe ọdịnaya gị ga-adị na ihe dị iche iche ị ga-enyoc na bl.
Bloggeri Kate bụ onye na-nri CookieAndKate nwere ndepụta weebụ ebe zuru ezu. Naanị lelee otú e si akọwa ihe ndị a na-eme na otú ụfụma na-adaba adaba:
Yabụ ọ bụrụ na ị ga – enwe saịtị nwere nnukwu ọdịnaya, we nwere ike menuga maka menu dịka nke a.
Ukwu! Mee nke a – Dịka o kwesiri, tupu ịmalite blọọgụ gị, ịkwesịrị inwe ọhụụ opekata mpe nke 20. Kedu nke pụtara, ọ bụrụ na ibipụta akwụkwọ ugboro abụọ n’izu, a ga-ekpuchi gị abịọa.
Nzọụkwụ # 3: Mepụta ọdịnaya (na-elektrwasị anya në visuals)
Akụkụ akụkụ nke ọdịnaya gị ga-abịara gị. Ekele gị nka na ngrohtë. Otúdị, ederede a ga-eme ka ọkara nke ọdịnaya gị
Bụrụ ihe oyiyi nke achịcha a gwakọtara ma ọ bụ ihe ndị na-emepụta ihe, ihe oyiyi na-abụ akụkụ buru ibu nke otu blog nri. Nke pụtara na ị gaghị emeli foto foto mediokre. Ma obi dị ụtọ, ị nwere ihe ndị a na-enye nri nchịkọta nri na-enweghị atụ ị nwere ike ịmụta site na:
N’okpuru ihe nkiri: Fotografia e Ushqimit (Parfaiti i Jogurt)
Ọ bụrụ na ịnweghị oge ịmụ ọtụtụ ihe, sitebụlagodi bido site na ngwa ngwa a rụrụ arụ na nke ruru unyi:
Debe mpempe akwụkwọ maọ bụ efere na counter
Jide igwefoto gị na na
Ju nuk keni nevojë për krijimin e faqes tuaj në blog në WordPress. Ụ bụrụ na ị nwere ego itinye ego na mmụta, lelee mmemme d Foodka Ushqim Blogger Pro. Ma ọ bụ, mee ihe kachasị mma ma soro ma mụọ blọọgụ nri ndị ọzọ wee mụta ihe na ha.
Redaktori Ntuziaka – Ndihmoni bipụtara isiokwu a na saịtị anyị nwanyị BuildThis.io. Anyị emelitela ọdịnaya ahụ tupu anyị ebidoghachi akwụkwọ ebe a.